Pasinei nematambudziko ukasangana kana uchishandisa dr.fone Toolkit, tiri nguva dzose pano kukubatsira basa kunze.
Dzosa Registration Code
Kutibatsira kukubatsira uchitsanya munzira, tapota kupindura mibvunzo inotevera 2-3, uye isu ichakubatsirai kurudyi chikwata basa. (Support Technical, Customer Support kana Sales)
Tingabatsira sei iwe?
Ndine mamwe mibvunzo hwokugadzira pamusoro chigadzirwa I watengwa.
Ndine mubvunzo pamusoro kunyoresa code, kudhanilodha, kugadzwa kana simba chigadzirwa wangu.
Ndinoda kuziva kwako rezinesi ndiwedzere uye dzosera mitemo.
Ndiri chete ndichipfeka zvakatanga uye ndine mibvunzo.
Ndine mimwe mibvunzo pamusoro chigadzirwa mabasa uye miganhu pamberi kutengwa yangu.
Ini kare akaita kutenga , asi ndine mibvunzo pamusoro hurongwa hwangu .
Ndine mazano maneja chigadzirwa.
Ndinoda kuudza wongororo dzangu nevamwe vatengi.
Please select yako chaiyo inodiwa vapasi.
mubvunzo wangu pamusoro nokupora mafaira kubva yangu iPhone, iPad uye iPod touch.
dr.fone Toolkit nokuti iOS
dr.fone Toolkit nokuti Android
Ndine mibvunzo hwokugadzira pamusoro chigadzirwa I watengwa.
Wondershare Dr, Fone nokuti iOS
Wondershare Dr.Fone nokuti Android
mubvunzo wangu pamusoro recoverying mafaira kubva yangu Android Smartphones (Samsung, etc.)
Hapana apa, tapota kusarudza chirongwa muri kuda
Ndapota kuposita mibvunzo uye kuwana mhinduro kubva nyanzvi PDFelement Community.
Please select mumwe muchikwata hunonyatsotsanangura nyaya yako.
Ndinoda kuziva kuti chirongwa anoita kuti adzikunure mashoko angu ndisati vatenga payo.
Software edu anokwanisa kugadzira iOS errros sevaya vanorondedzerwa. Izvi zvinoreva kuti uchishandisa hurongwa iri rakagadzirwa (eg rakabayirwa kupora muoti kana Apple Logo loop) uye kudzosa mudziyo kudzokera kwomuzvarirwo uchishandisa mamiriro. Izvi zvinogona kuitwa pasina kukanganisa mashoko enyu. Ichi chinhu kuti zvichaita chete kushanda akabhadhara shanduro-software yedu, uye hakuna hakurevi kuti zvichava kushanda.
Awesome, dambudziko chakagadziriswa! Ndinoda rubatsiro zvakananga. Tanga Over
Tinokoshesa zvinofungwa vatengi vedu, uye kugamuchira kuti atitaurire wako ruzivo yako Wondershare Product. isu Tumira dzako pfungwa, zvikumbiro, kana kunyange mashoko. Kunyange zvazvo tisingakwanisi zvakananga kupindura inofambiswa wako, tichashandisa kuti kuvandudza zvinhu zvedu uye mabasa. isu kana une hwokugadzira kana rutsigiro mamiriro ezvinhu, ipapo nehofisi nomutsa kushandisa kwedu Support Center, sezvo tichakwanisa kupindura pamwe rubatsiro
Zvingaitwa kana zvinodiwa kuti chirongwa zvinhu
A okurumbidza pamusoro chigadzirwa
Tinoonga zvechokwadi mashoko ako uye mazano zvinhu zvedu. inofambiswa Your chichange anotumirwa yedu budiriro chikwata Zvokukurukura uye kuona kana inogona kuwedzerwa zvabudiswa munguva yemberi. Kunyange dzatisingazokwanisi kupindura shure, ziva kuti tichaita zvose zvatinogona kuti zvakanakisisa chigadzirwa zvatinogona, uye inofambiswa wako kuchatibatsira zvikuru.
Kana ukaita kubatsirwa nemumwe zvinhu zvedu, onana rutsigiro chikwata kwedu Support Center.
Ndinokutendai nokuti nguva yako, uye kutsigira!
(Maximum Saizi Upload faira: 60 MB)
Pay Method Paypal Kadhi rechikwereti
Operation System Windows 10 (32bit) Windows 10 (64bit) Windows 8 (32bit) Windows 8 (64bit) Windows 7 (32bit) Windows 7 (64bit) Windows Vista (32bit) Windows Vista (64bit) Windows XP (32bit) 10.10 (Yosemite) 10.9 (Mavericks) 10.8 (Mountain Lion) 10.7 (Lion) 10.6 (Snow Leopard) 10.5 (Leopard) 10.4 (Tiger) 10.11 (Captain) 10.12 (Sierra) Other
Operation System Windows 10 (32bit) Windows 10 (64bit) Windows 8 (32bit) Windows 8 (64bit) Windows 7 (32bit) Windows 7 (64bit) Windows Vista (32bit) Windows Vista (64bit) Windows XP (32bit) 10.10 (Yosemite) 10.11 (Yosemite) 10.9 (Mavericks) 10.8 (Mountain Lion) 10.7 (Lion) 10.6 (Snow Leopard) 10.5 (Leopard) 10.4 (Tiger) 10.11 (Captain) 10.12 (Sierra) Other
Android Data Recovery Android SD Card Data Recovery Android Chakundikana sikirini Data Recovery Android Lock Screen Removal
Email kwandiri ichi mhinduro
Kupa akakumbira mashoko uye tichava batanidza iwe nemumwe wedu rutsigiro nevamiririri.